February | 2021 | QEERROO
Oromoon gantootaan ganamee qe’ee isaa irratti salphifamee ajjeefamaa jira. Waajjiraaleen ABO fi KFO hundi cufamanii hooggantootni, miseensotnii fi deeggartootni mana hidhaatti ukkaamfaman. Hidhaa hayyootaa fi lagannaa nyaataa haqaaf jecha taasisaa jiramutti dabballootni PP qoosan. Lammiilee Oromiyaa fi hayyoota diina kokkee qabuun jijjiirama kanaaf gahee leencaa gumaachanitti qoosame. Hedduun immoo mana murtiittuu osoo hin dhiyaatiin ugguraman.Garii manni murtii bilisa jedhee waajjira poolisiitu imaanaa kaa’aman jedhee baasuu dide. Gabaabumatti Lammiileen Oromiyaa ganamne. Jijjiirama dhiigaa fi lubbuun itti wareegame keessatti saphifamne. Garuu,furtuun harka keenya waan jiruuf Guraandhala 15/2013 ALH ykn Guraandhala 22/2021(BOR) irraa eegaluun Oromiyaa guutuu keessatti tarkaanfiin armaan gadii ni fudhatama. Continue reading →
Posted on February 13, 2021 by Qeerroo